मुकुट, लोकतन्त्र र शक्ति « Loktantrapost
मुकुट, लोकतन्त्र र शक्ति
११ पुष २०७३, सोमबार १३:४३
एकपटक फेरि दोहोरियो, मिडियाको मसलामा ज्ञानेन्द्र शाहको विलापपूर्ण व्यञ्जन । एक वक्तव्यको व्यञ्जनभित्र उनले पुनः एकपटक मसला मोल्ने जमर्को गरे । भने– ‘नेपाली जनताबीच फाटो आयो । राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा प्रश्न खडा भो । हाम्रा वंशवृन्दले हिफाजत गरी राख्न दिएको मुलुक सङ्घीयताको नाउँमा तोडमोड हुने भो । गणतन्त्रका नाउँमा विदेशी शक्तिको चलखेलले तराई, पहाड, हिमालको ऐक्य भावनामाथि प्रहार गर्ने भो’ आदि–इत्यादि ।
भूपू राजा, आउट् डेटेड शक्ति र एक नागरिकको हैसियतले मुलुकबारे यति चिन्ता लिनु त लोकतन्त्रमा मनासिबै हो । लोकतन्त्र जनताबाट सिर्जित एक प्रत्यक्ष शक्ति हो । जनताको मनसुबाले भित्रिएको लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको हक, अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ । त्यो शक्तिको वाहक दलीय प्रतिष्पर्धाबाट आएका नेता हुन्छन् । र, संवाहक हुन्छन् अधिकार सम्पन्न जनता तथा नागरिक । त्यो शक्तिमा निहित अङ्कुरको सिर्जना र प्रवाह पनि नागरिककै निम्ति हुन्छ । तसर्थ, लोकतान्त्रिक शक्तिमा आस्था राख्ने नागरिकले दल तथा नेताको कुबुद्धि र स्वार्थजडित आचारप्रति औँलो ठड््याउनु मनासिब हो । र, तिनलाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक पटरीबाट अग्रगमनको दिशातिर कुद्ने बाटो देखाउनु उचित पनि हो । ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकको औतारमा त्यसै गरेका हुन् भने त्यो मान्य हो ।
मिडियाका हेड–लाइन र हेड–कथनहुँदो बेलाबेला उनी यसै गरी प्वालबाट निस्केको मुसोझैँ निस्कन्छन् । र, खस्याक्खुसुक काट्ने कसरत गर्छन् । कारण, उनीसाथ इतिहासको ठेली र मृत ऊर्जा छ । सायद, ऊर्जाको जीवन्तकालमा त्यसको प्रयोग त्यो निजी दृष्टिमा अपुरै हुँदो हो । तब त, यदाकदा आफ्नो अपूर्ण धोको विलापमय ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् ।
इतिहासको प्वालबाट जतिबेला उनी निस्कने र अनुहार देखाउने चेष्टा गर्छन्, त्यतिबेला नेपालका राजनीतिक दल र दलीय मुख्य नेताका मुहारमा शङ्का र सकसका नाना तरङ्ग फैलिन्छन् । नेताजनका ती अनेकवली शङ्का र सकसको एकमात्र कारण आफैँ हुन् । जब, लोकतन्त्रमा राजनीतिको प्रयोग र प्रतिष्ठा, गन्तव्य र गरिमा, शासन र सामथ्र्यलाई यी केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धका बाटा ठान्छन्, जनता तथा नागरिकका प्राप्यमाथि यी खेलवाड गर्छन्, जनवर्गमा आइपरेका विविध सङ्कट यी देख्तैनन् तब त्यस्ता मृत ऊर्जालाई जाग्ने बहाना प्राप्त हुन्छ । यहाँ यस्तै भइरहेछ । नेताजन खुद बहाना प्रदान गर्छन् । र, प्रेतबाट तर्सिने शङ्का आफैँ प्राप्त गर्छन्् । पूर्व राजाका व्यञ्जनाले यी अग्घोरै तर्सिए । मानौँ, ज्ञानेन्द्र सरकारले फेरि सहजै श्रीपेच धारण गर्छन् र हाम्रा नेताजनको हुर्मत काढ्छन् । मानौँ, राजतन्त्रको मुकुट सहजै शिरमा चढ्छ र हाम्रा नेताजन सहजै सत्ताच्युत् हुन्छन् । मानौँ, मृत राजतन्त्रको पुनः रजगज हुन्छ, र लोकतन्त्र सहजै लुप्त हुन्छ । तब त, भूपू राजाका बेलाबखतका यस्ता कथनमा लोकतन्त्र बाहक नेताजन सशङ्कित हुन्छन् र तर्सिन्छन् ।
बेलाबेला हाम्रो इतिहास बनिसकेका नरेश ज्ञानेन्द्र शाह अनेक मुद्रामा देखिने चेष्टा गर्छन् । सायद, सत्ताको स्वादमा क्रुरताले भरिपूर्ण महाराज बन्ने उनको धोकोले पूर्णता पाएको थिएन कि ! नागरिकको हैसियतलाई ठुन्क्याएर प्रजामा झार्ने कला कौशलको तृप्ति सिद्ध भइसकेको थिएन कि ! र, मुलुकमा शाहवंशीय राजामध्ये सर्बोत्तम क्षमताको परिचय दिन अझ बाँकी नै थियो कि ! तब त, यदाकदा उनको अन्तर्मनले भन्दो हो, ‘म राजा हुँ नि । मेरो महत्व र आवश्यकता यो मुलुकलाई छ नि । राष्ट्रियताको जगेडा र जगेर्ना गर्ने नरेश–वंशावलीमा म अझै जिउँदै छु, मरिसकेको त छैन नि ।’
मुलुक लोकतन्त्रको अभ्यास र सङ्घीय गणतन्त्रको कसरतमा अघि बढेको छ । वंशानुक्रमका अनेक शासनबाट गुज्रिएर मुलुक बल्ल बामे सर्न खोज्दैछ । जनताको जगमा टेकेर मुलुकले यो संसारमा बल्ल शिर ठाडो पार्न प्रयास गर्दैछ । मुलुकका निम्ति यो समय अति कमजोर र संवेदनशील त हो नै । तर, यो कमजोरी र संवेदनशीलताको फाइदा लिने चेष्टा हो भने, हेक्का राख्नुस् महाराज, शास्त्रीय ज्ञान, अर्ति र नैतिकताको धारले प्रस्ट भन्छ, जनताको शक्तिद्वारा जब माथको मुकुट उत्रन्छ तब राजाको स्वतः मृत्यु हुन्छ । ऊ एउटा इतिहास बनेर बस्छ । र, त्यो बेला जिउँदै छु नि, भनेर आफ्नो भौतिक शरीरलाई नियाल्दा गुमिसकेको केही पनि प्राप्त हुँदैन ।
इतिहासको गर्तमा प्रविष्ट राजतन्त्रको मुकुट नेपाली जनताले नै उतारेका हुन् । दुनियाँ साँची छ, अढाई करोड नेपालीका हातले राजाको मुकुट उतारेर अकाट्य रुपमा रचेको इतिहासको । दुईसय चालीस वर्षको कालखण्डभित्र नेपालीहरू राज–मुकुटमुनी कक्रिएर बसे, र निमुखा प्रजा बनेर बिताए । यो खेर गएको समय चानचुने समय होइन । स्वतन्त्रता र स्वाभिमान, समावेशी र सामूहिकता, समृद्धि र विकास, लोकतन्त्र र अग्रगमन तथा हक र अधिकारका लागि पनि यो चानचुने कुरो होइन । तब त, नेपाली जनताले ठाने, अब आइन्दा त्यो मुकुटको स्थान ज्ञानेन्द्र शाहको माथ होइन । बरु, लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिमा विश्वास राखेर रचना गरिएको इतिहास पो हो । र, त्यो मुकुटको स्थान, प्रजा बनाएर खुम्चयाउने कुत्सित माथभन्दा नागरिकको सटिक स्थान प्रदान गरेर गतिशील बनाउन सक्ने विवेकशील स्थान पो हो ।
ज्ञानेन्द्र शाह को थिए, को हुन् र के भए भन्ने कुरो इतिहासको एउटा गाथा हो । इतिहासमा उनी एक राजा थिए । वर्तमानमा उनी एक नागरिक हुन् । इतिहासमा शक्तिकेन्द्रका स्थानमा उनको मुकुटधारी शिर ठाडो थियो । त्यो उनको अहोभाग्य थियो । वर्तमानमा नागरिकसरह उनको मुकुटहीन शिर ठाडै छ । यो हामी नेपाली जनताको अहोभाग्य हो । इतिहासमा नेपाल हाँक्न उनको शक्तिकेन्द्र सक्रिय बनेको थियो । त्यो राजतन्त्र थियो । वर्तमानमा लोकका निम्ति लोकले नै रोजेर ल्याएको शासन पद्धति छ । यो लोकतन्त्र हो । र, इतिहासमा उनी पढिन्छन्, मनन र मन्थन गरिन्छन् । तर, वर्तमानमा लोकको शक्ति, सत्ता र सामथ्र्यलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । र त, यो लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले हाम्रा नेताजनलाई हेक्का राख्न आग्रह छ, लोकतन्त्र तिम्रो गनीमत होइन, जुन खाइ पचाएर तिमी यहाँ बारबार तर्सिनु परोस् । बरु, लोकतन्त्र त देश र जनताको समुन्नति सिद्धान्तको एक असल मार्ग पो हो । र, सौर्य ऊर्जाझैँ यो लोकमतबाट प्राप्त हुने विशाल शक्ति पनि हो ।